Umpompo wempompo yokuTsala, i-China Roots Vacuum Pump abavelisi, abaXhasi, iFektri -NANTONG RONGHENG YENDALO YOKUSINGQONGILEYO CO., LTD.
Ikhaya>iimveliso>Iingcambu Blower / Vacuum Pump>Umpompo we-Vacuum Pump
I-VP uthotho lwepompo yokupompa yompompo womile-ompompo-ompompo wokucoca ompompo owenziwe yinkampani yethu ngesantya sokumpompa esikhulu kunye nemfuno engafunekiyo yokufunxa yempuphu kunye nephepha, ukupakisha isitshixo kunye namanye amashishini.
Ukupakishwa kwe-vacuum, i-pulp kunye nokuveliswa kwephepha kunye namanye amashishini kunqabile ukuba asebenzise iiyunithi ezinkulu ze-vacuum, kuba iimfuno zokuphakama azikho phezulu, imfuno engaphezulu yeyokukhawulezisa uzinzo olukhulu, kwaye uhlala ufuna ukulungiselela iimpompo ezincamathelayo kwindawo yemveliso, ke iimpompo zengcambu eziqhelekileyo zisetyenziswa ngokuthe ngqo. Nangona kunjalo, iimpompo zeRoots eziqhelekileyo, ngakumbi iimpompo ze-Roots, zinengxolo kwaye azilungelanga ukwakhiwa kwesiza. Ukongeza, ukucocwa kwangaphakathi okuncinci kweempompo zesiqhelo zeRoots akululutho kumashishini anenkunkuma eninzi njengokupakisha iphepha.
I-VP uthotho lweempande ezincamathelayo iimpompo ezincamathelayo, zisebenzisa izibonelelo zokuthula zeprofayili ye-CONCH yentsimbi kunye neenzuzo zomphezulu wesitywina esine-blade ezintathu, zineempawu zokuphakama okuphezulu, ukusetyenziswa kwamandla okuphantsi, ingxolo ephantsi, ukusebenza ngokugudileyo Ukusetyenziswa kabini.
Ngenxa yokusebenza okugqwesileyo kweprofayili ye-CONCH, i-VP blowers series inokufikelela kwisantya sokumpompa phantsi kwenkqubo efanayo ethetha ukuba ukucocwa kwangaphakathi kwempompo ye-VP Roots pump kunokuba nkulu kakhulu kuneemveliso zenqanaba elifanayo, kwaye Kunqabile ukuba ibhlokhi. Ukuze kuphuculwe ukusebenza kwempompo ye-VP ye-Roots pump, inkampani yethu iqulunqe isizukulwane esitsha se-silencer barrel barrel yolu ngcelele lweemveliso, ezinokucoca ngokufanelekileyo izithintelo, ukunciphisa ngakumbi ingxolo, kunye nokuphucula umgangatho wendawo yokusebenza.
● Imowudi yokuhambisa: ibhanti, uqhagamshelo ngqo;
● Igwebu kunye nendawo yokuphuma: ubume obukhethekileyo obunobume bedayimani, ukuhamba komoya kuzinzile;
● Izixhobo: Amanqanaba amahlanu okuchaneka kokuchaneka, ukuchaneka kokuhambisa okuphezulu, ingxolo ephantsi;
● Itanki yeoyile: itanki yeoyile enye / ephindwe kabini uyakhelo, ubumbeko oluguquguqukayo;
● Iifom ezimanzi nezomileyo: ukumiliselwa okomileyo nokumanzi kukhethwa ngokuzithandela;
● Ubume bomzimba: ubume bendabuko, uhlobo oluxineneyo;
Isantya sokumpompa: 0.6 ～ 713.8m³ / min;
U Indawo yokuphumla: eyomile-49kPa, emanzi-68kPa;
Isantya esisebenzayo: 500 ~ 2000RPM;